Ahoana no marina eo anatrehan'Andriamanitra? — Trip LEE - OFISIALY SITE
Ahoana no olo-marina eo imason'Andriamanitra 'Andriamanitra? Izany dia mitovy marina tokoa amin'ny fanajana izay Kristy dia mpanota. Fa Nihevitra amin'ny fomba ny toerana, mba ho mpanao heloka bevava eo amin'ny efitrano, ary mety ho nanao amin'ny ho mpanota, tsy noho ny fahadisoana, fa ho an 'ireo hafa, satria izy madio sy afaka amin 'izay fahadisoantsika, ary mety hiaritra ny famaizana izay tokony ho antsika- tsy ny tenany. Izany dia ao amin'ny tahaka, marina tokoa, fa olo-marina isika ankehitriny ao aminy- tsy fanajana ny fandikana fahafaham-po ho amin'ny fahamarinan 'Andriamanitra amin'ny alalan'ny amin' ny asa, fa noho isika dia hotsaraina ny ao amin'i Kristy ny marina, izay efa hitafy ny finoana, mba ho antsika.
Tohin'ny tsikelikely ary aoka izany Milentika amin'ny! Aho nahita izany notsongaina raha manomana ny hafatra ao amin'ny 2 Corinthians 5:18-21 fa ny Campus Outreach National Conference. Good zavatra
Mary Gayle • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:09 aho • navalin'i